Abuur nidaamyo wax soo saar adag oo ku saabsan Quarry | Androidsis
Quarry waa warshad otomaatig ah iyo ciyaarta jilitaanka abuurka nidaamka Factorio; ciyaar PC ah oo ka tagtay dadka maxalliga ah iyo shisheeyaha oo aad ula yaabay awooddeeda weyn ee ay ku abuureyso nidaamyo otomaatig ah oo si otomaatig ah u leh soo saaridda, farsamaynta iyo soo saarista qalab kala duwan si ay ugu dambayn ugu beddelaan alaabooyin kala duwan.
Quarry-ku wuxuu ka ciyaaraa hal horyaal, inkasta oo farqiga weyn ee aanan yeelan doonin dabeecadda aad uga baxsan dhulka meeraha aan weerareyno xarumahayada. Ciyaar cusub oo qiimo leh oo loogu talagalay Android oo u taagan inay ku siiso qayb ka mid ah ciyaarta 'Factorio' oo aan rajeyneyno in si habboon loo cusbooneysiin doono.
1 Halkan waa waqtigii la abuuri lahaa nidaamyo otomaatig ah
2 Laga soo bilaabo salka illaa kakanaanta silsilad wax lagu farsameeyo oo dhan ee 'The Quarry'
3 Isbaanish weli kuma jiro
Halkan waa waqtigii la abuuri lahaa nidaamyo otomaatig ah
Fadliga ugu weyn ee Quarry-ku waa taas wuxuu kuu dhigayaa "sanduuqa sanduuqa" ama "sanduuqa ciyaarta ciid" si adigu adigu aad u sameysato nidaamyadaas oo mas'uul ka noqon doona soo saarista dhagaxa ka dibna u beddelaya nooc kale oo ka mid ah maaddada la farsameeyay. Waxaan leenahay khariidad aad u ballaaran oo 2D ah oo taxane ah qalab si aan kala sooc lahayn loo qaybiyey oo ay tahay inaan si xirfad leh u ururino ka dibna u hawlgalno.
Kamahadleyno inaan dhigno astaanta warshad waxayna bilaabeysaa inay si otomaatig ah u soo saarto, laakiin halkii waa inaad dhigtaa miinada lafteeda iyo suunka xamuulka in jidh ahaan «mideeyo» meesha ay miinadu ku taal isla midda halka maaddada ina xiisaysaa ay tahay. Tan kaliya maahan, laakiin waa inaan ogaanno sida caqliga leh loogu dhigo suunka xamuulka si uu hal jiho ugu socdo sidaasna howsha oo dhami ku dhammaato.
Waxaan ka hadleynaa saldhiga ugu fudud ee 'The Quarry', maadaama aan helno qalab badan, waan awoodnaa maalgeli cilmi baarista iyo horumarinta si loo helo farsamooyin iyo mashiinno cusub oo naga caawin doona sidii aan ula soo bixi lahayn ilaha cusub ugana shaqeyn lahayn uguna qaadi lahayn qaabab cusub.
Laga soo bilaabo salka illaa kakanaanta silsilad wax lagu farsameeyo oo dhan ee 'The Quarry'
Si kale haddii loo dhigo, laga soo bilaabo fududeynta silsiladdeena ugu horreysa ee wax soo saarka waxaan u rogi karnaa warshaddeena farsamo aad u adag. Haddii aan isku hallayno haysashada 100 mashiinno kala duwan iyo 100 kheyraad iyo wax soo saar, waxaad fikrad ka heli kartaa wax kasta oo soo socda.
Xaqiiqdii, in la soo saaro “chipkaaga” koowaad uma baahnid wax ka badan ama aan ka yarayn 30 saacadood oo ciyaar ahMarka haa, Quarry-ku waa ciyaar aad uga duwan waxa aan caadiyan ku aragno Android; oo sidaas darteed ciyaar u qalanta kala soocideeda.
Waa inaan dhahno dhamaan kakanaanta warshaddeena ku dhalan doona adduun joogto ah inaan joojin karno haddii nalagu qasbo inaan sameyno "mashiinka" aan u baahan nahay joogsi aan ku dhexgalno farsamooyin iyo mashiinno cusub. Iyo haa, ujeedku waa in la abuuro alaab sida jajabyo u baahan doona dulqaad si loo barto farsamooyin kala duwan, oh iyo Ingiriisi.
Isbaanish weli kuma jiro
Dhibaatada weyn ee dad badani waa taas waxaad u baahan doontaa inaad taqaanid ingiriisiga si aad u barato waxyaabaha ku jira iyo wixii ka soo baxa The Quarry. Waqtigaan la joogo ma ogin inay turjumi doonaan, marka hadda si aad awood ugu yeelatid toogashada ciyaarta waxaad u jiidan doontaa turjubaanka Google haddii aad wax fahanto, maxaa yeelay kuwa jecel cayaaraha noocan ah waxay u dhowdahay muhiim u ah inuu kuugu jiro mobilkaaga. Iyo xitaa intaa ka sii badan markaan ogayn haddii Factorio uu imaan doono Android; in kasta oo aan leenahay Mindustry oo aan dhowaan uga hadli doonno qaybahan.
Quarry waa ciyaar taas qiimihiisu ka yar yahay 1 euro iyo inaad leedahay demo si aad ugu tijaabiso bilaash. Farsamo ahaan waxay ku saleysan tahay farsamooyinka ay na siiso si aan u abuurno warshado si otomaatig ah u shaqeeya oo aan ku arki doonno inay ka shaqeeyaan shaashaddayada sidii inay yihiin mid dhab ah. In kasta oo muuqaal ahaan aysan ahayn tan ugu fiican, haddana waxay noo ogolaaneysaa inaan si wanaagsan u kala soocno kheyraadka oo aan qorsheyno nidaamyadaas adag.
Un ciyaar gaar ah oo la yiraahdo The Quarry taasina waxay albaabka u fureysaa horumariyeyaashu in ay waxbadan ku sharaddeeyaan fikradaha asalka ah ee hoosta ka xariiqaya habab kala duwan oo lagu qabto khibrad ciyaar taleefanka gacanta. Haddii aad u xiisto Factorio mobilkaaga, The Quarry waa bedelka saxda ah.
Sidee balwad u noqon kartaa abuurista nidaam otomaatig ah
U fiirso sida ay mashiinnadaadu u soo saaraan, u dhoofiyaan waxna u soo saaraan
Sawir gacmeedyo cadaalad ah waxaad u baahan tahay
Developer: Ciyaaraha Dakror
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Abuur warshado si otomaatig ah u shaqeynaya oo la a Factorio ah The Quarry for Android
Monopoly loogu talagalay diiwaangelinta hore ee Android waxay ka furan tahay Dukaanka Play